Pogba Muxuu Ka Yiri Hadii Ay Ka Quusteen EPL Iyo Kooxaha 4 Sare Kamid Noqon Karta Xagaagan %
Xidiga khadka dhexe uga dheela kooxda kubada cagta Manchester United ee Paul Pogba ayaa wuxuu aaminsan yahay in inta ka dhiman xili ciyaareedkan ay udagaalami doonan horyaalka Premier League, ee wadanka Ingiriiska.
Manchester City ayaa waxay hada tahay kooxda ugu cad-cad inay qaado horyaalka maadaama ay ku hogaamineyso 78 dhibcood islamarkaana ay ka sareyso Man United oo kaalinta labaad ku jirta 20 dhibcood oo nadiif ah xili ay leedahay Red Devils 61 Buundo.
Pogba ayaa wuxuu kaloo aaminsan yahay in kooxaha kala ah: Manchester City, Man United, Liverpool iyo Tottenham ay kamid noqon karaan afarta koox ee ugu sareysa horyaalka EPL, marka laga soo gaba gabeeyo fasal ciyaareedkan.
“Inkastoo, Man City ay tahay kooxda kaalinta koowaad ku jirta, hadana waxaan nan leyska indho tiri karin inay tahay koox si awood leh ku socota,” ayuu Pogba ku sheegay wareysi xasaasi ah oo uu siiyay Shabakada TyC Sports.
“Laakiin, waxaa wali harsan kulamo laga dheeli doono, waxaana diyaar unahay inaan guuleysano inta ciyaar ee aan dheeleyno inta ka dhiman xili ciyaareedkan,” ayuu hadalkiisa kusii daray, xidiga saddexaad ee aduunka ugu qaalisan.
Dhanka kale, Pogba oo wax laga weydiiyay wararkii leysla dhexmarayay ee ku aadanaa inay isku dhaceen mar sii horeysay macalinka Mancheter United, ee Jose Mourinho ayaa wuxuu ka gaabsaday inuu su’aashaas si toos uu uga jawaabo.